शताब्दी पुरुष जोशी र उनकी धर्मपत्नीले मरणोपरान्त शरीर दान गर्ने घोषणा Global TV Nepal
न्यायालयको मामिलामा काँग्रेसले हस्तक्षेप गर्दैन: रामचन्द्र पौडेल मंसिरभित्र महाधिवेशन सक्न निर्वाचन समितिलाई सभापति देउवाको निर्देशन बार सल्लाहकार समितिले भन्यो: प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्छाै जातिय विभेद सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्धछ : गृहमन्त्री खाँण चीनमा ४० लाख जनसङ्ख्या भएको एक सहरमा फेरि लकडाउन आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात संवैधानिक कानुनमञ्चले मागे प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
शताब्दी पुरुष जोशी र उनकी धर्मपत्नीले मरणोपरान्त शरीर दान गर्ने घोषणा
ग्लोवल टि.भी. शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ 0
काठमाडौं । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी धर्मपत्नी राधादेवी जोशीले आफ्नो मरणोपरान्त शरीर चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि दान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच जोशी दम्पतीले आफ्नो शरीरको शेषपछि चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि किष्ट मेडिकल कलेजलाई अर्पण गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी धर्मपत्नी राधादेवी जोशीले किष्ट मेडिकल कलेजलाई लेखिएको शरीर दान गर्ने मञ्जुरी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो छोरा अनुराज जोशीसमेतको सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो शरीरको लामो आयु कसरी भयो भनेर अध्ययन गर्न काम लागोस् भनेर स्वेच्छाले दान दिएको बताए ।
घोषणा कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शताब्दी पुरुष जोशीले शरीर दान दिन गरेर माइलस्टोन कोर्नु भएको बताए । उनले आफ्नो जीवनमा अनेकौँ इतिहास रचेकाले सबैको गौरव, प्रेरणा र आदर्श रहेको बताए ।
महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले राष्ट्रमा योगदान पु¥याउने राष्ट्रसेवकलाई सम्मान गर्दै आएको बताए । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई पनि महानगरपालिकाले सम्मान गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भन्यो, पहिचान नखुल्ने व्यक्तिलाई कोठा भाडामा नदिनू
बस दुर्घटनामा परी ६५ जना घाइते
हुम्लाको हिल्सामा एकसातादेखि हिमपात
सुजिता प्रकरणः मोबाइलको फरेन्सिक जाँचमा प्रहरी
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट
उपत्यकामा दशैँ लक्षित खसि बोका भित्रिन थाल्यो
एमालेका नेताहरूले सोधे, माओवादीको दल दर्ता खारेज गर्न दिएको निवेदन के हुँदैछ ?
सत्ता साझेरुढ गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै
सबै स्थानीय तहमा प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन